မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: တော်လှန်ရေး၏ ပထမခြေလှမ်း “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
မင်္ဂလာ ပါ မိတ်ဆွေတို့
ယနေ့ ကမ္ဘာနှင့် အ၀ှမ်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အာဏာရှင် စနစ် ဖြုတ်ချ နိူင်ရေး ကြိုးပမ်းများကို အားကျအတုယူကာ ကျနော်တို့ နိူင်ငံ အတွင်းမှာ ပြည်သူလူထု အပေါ်ကို
အနိူင်ကျင့် ဗိုလ်ကျ ကာ အမျိုးမျိုး ဒုက္ခပေးနေတဲ့ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို အမြစ်ပြတ် နှိမ်နှင်းကြဖို့ စတင်လုပ်ဆောင်နေကြပါပြီ ။
ပထမဦးစွာ လူထုလုပ်ရှားမှုများ ညီညာစွာ စတင် လုပ်ရှားနိူင်ဖို့ အတွက် တိုက်တွန်း နိူးဆော်ချက်များ ဖြန့်ဖြူးနိူင်မှသာ အမြန်ဆုံး စတင် နိူင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။လက်ရှိ မြန်မာနိူင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို အခြေခံပါတယ်လို့ ကြွေးကြော်ထားကြပေမယ့် တကယ့် လက်တွေ့ အနေအထားမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးနှိမ်မှု အများဆုံး နိူင်ငံထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက ဆက်လက် ရပ်တည်နေဆဲပါဘဲ ။
တော်လှန်ရေး ဆိုတာကတော့ အထိအခိုက် အကျအဆုံး ရှိမှာအမှန်ပါဘဲ ။ သို့သော် ထိုသို့ ထိခိုက်ကျဆုံးမှုများနည်းပါး စွာဖြင့် အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိူင်မည့် လမ်းစကို ကျနော်တို့ တတွေ ကြိုးစားဆောင် ရွက်ကြရပါလိမ့်မယ် ။ ပထမဦးစွာ နည်းပညာကို အခြေခံ၍ သတင်း အချက်အလက်များ ပြန့်ပွားအောင် ၀ိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ပေးကြခြင်း ဖြင့် တော်လှန်ရေး အတွက် ပထမ ခြေလှမ်းကို ကျနော်တို့တတွေ ယုံကြည်စွာ ဖြင့် စတင် လှမ်းလျှောက်ကြည့်သင့်ပါပြီ ။ ခရီး တခုရဲ့ အစဟာ ခြေတလှမ်းပါ ဆိုရင် ကျနော်တို့တွေ ခြေတလှမ်းနဲ့ ခရီးစဉ် စလိုက်ရင် မကြာခင်မှာ ကျနော်တို့တတွေ လမ်းလျှောက်ချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းမပေါ်ကို ရောက်ရှိမှာ အမှန်ပါဘဲ ။
ဒုတိယ အဆင့်အနေနဲ့ ပြည်တွင်းမှာ သတင်းနှင့် တိုက်တွန်း နိူးဆော်စာများကို ပြည်သူလူထု လက်ဝယ် ရောက်ရှိစေရေး အတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြရင် ပိုမို ထိရောက်မှာပါ ။ ပြည်တွင်းမှာ လုပ်ရှားတဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အာဏာရှင် စနစ်အောက်မှ လွတ်မြောက်အောင် ရုန်းထွက်ဖို့ လမ်းစကို တကမ္ဘာလုံးမှာ ကျင့်သုံး လိုက်နာ ဆောင်ရွက် လုပ်ရှားနေသလို ကျနော်တို့ နိူင်ငံမှာလည်း ညီညာစွာ လုပ်ရှားခဲ့ရင် ယနေ့ ပြည်သူလူထု ခံစားရတဲ့ ဒုက္ခဆိုး များအောက်က အမြန်ဆုံး ရုန်းထွက် လွတ်မြောက်လာမှာ အမှန်ပါဘဲ ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ကိုသူတို့တွေ့ လေးနက်စွာ ယုံကြည်လာစေဖို့ အတွက်ပါ ။
ကိုယ့်ထမင်း ကိုယ်စားပြီး နိူင်ငံရေး လုပ်ရှားကြမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အခက်အခဲဆိုတာ ရှိလာမှာ အမှန်ပါဘဲ ။ ဒါပေမယ် ဒီလို ခဏတာ အချိန်လေးမှာ အပင်ပန်း ဆင်းရဲ ခံလိုက်တာဟာ အနာဂတ်မှာ ကျနော်တို့ ဘ၀တွေ တိုးတက်ထွန်းကားလာမှာ အသေအချာဖြစ်နေလို့ စွန့်စားလုပ်ဆောင် ကြဖို့ လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံ လိုပါတယ် ။ ယခုကဲ့ သို့ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကိုယ်တိုင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်လိုသူများ များသထက် များလာအောင် ကျနော်တို့ အထူးကြိုးစားပြီး စည်းရုံး ကြရပါလိမ့်မယ် ။ လုံခြုံရေး အရ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုတာထက် သူဘာလုပ်ပေးနိူင်သလည်း ဆိုတာကို အခြေခံပြီး လုပ်ရှားကြဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ။
လုပ်ရှားဆောက်ရွက်လိုစိတ် ရှိသူများ ကျနော်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် နိူင်ပါတယ် ။ ကိုယ်နိူင်ရာ တာဝန်ကို ခွဲဝေ ယူချင်စိတ်များကို မွေးမြူကာ မြန်မာပြည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြီးဆိုးနေတဲ့ စစ်အာဏာရှင် စနစ် ကို ပြည်သူလူထုစည်းလုံးခြင်း ခွန်အားနဲ့ စတင် ဖြုချနိူင်ဖို့ ညီညာစွာ စတင်လုပ်ရှားကြပေးကြပါလို့ လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံ တိုက်တွန်း နိူးဆော် လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
Posted by အာဇာနည် at 9:35 PM
အီဂျစ်မှ မူဘာရပ် ခရီးသွားလာရေး အခက်အခဲ ကြုံနေရလေပြ...
လွှတ်တော်နော် လွှတ်တော်..ဝေလာဝေး ဒီမိုကရေစီ။
အဖေ့ လခ တလလုံးနေမှ ၄၅၀ ... ၁၉၈၅တုန်းက ခု တနေ့ တသော...
inside Job!! ကူညီမည်။ keep in touch!!
ပွဲကြည့်သူတွေက စောင့်ကြည့်နေပြီ။ ပွဲကမဲ့သူတွေ အသင်...
ကဒါဖီမိသားစု ပိုင်ဆိုင်မှု အတော်များများကို ဗြိ...
အမ်အိုင်ဂျီ - ၂၉ နဲ့ အကျိုးနည်းတော့မည်
ဂုဏ်ယူပါတယ် လစ် ဗျားပြည်သူ တို့ 
လူမဆန်တဲ့ခွေးစစ်တပ် ရဲ့ ကလေးလူငယ်များ အပေါ် ယုတ်မ...
သိန်းစိန် နဲ့သန်းရွှေ ဗုံးလိုက်ဖောက်နေသည် (သတိ)
ခွေးပြေးဝက်ပြေး ပြေးကြတော့ အာဏာရှင်
နိူင်ငံတိုင်းမှာ ဆန္ဒပြတာဆို ကြောက်နေကြပြီ..we Just...
ကဒါဖီရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့သားဆိုးများ
ပြည်တွင်းစစ် တွေ ရပ်
ကဒါဖီ၏ ခွေးရူးဘ၀ ဇာတ်ကြောင်း
ကဒါဖီတော့ ပြာနေပြီ..သန်းရွှေကို ရုံခါကြစို့ 
နအဖ ဗုံးဆင် အကြံထုတ်နေပြန်ပြီ..
လစ်ဗျား က ဂဒါဖီတော့ ပြေးနေပြီ ..အီဂျစ်က မူဘာရပ် ကေ...
ချက်ခနဲနေတာတောင် မီးမတောက် တဲ့ ရွှေတွေ
ကဒါဖီ အုပ်ချုပ်မှု တရားမ၀င်တော့ဟု သမတအိုဘားမားပြောဆ...
ပြည်တွင်းစစ် ရပ်ဆိုင်းရန် KNU တောင်းဆို
ဒန်ကလေကို တရားစွဲသူ အမျိုးသမီး အမှုရုပ်သိမ်းလို
အာဏာရှင်တို့ ၏ ဖက်ရှင်ပြပွဲ
အတုနဲ့ အစစ် ခွဲခြားဖြစ်ပါစေ
နှုတ်ပိတ်ခ ခြောက်သ်ိန်းနဲ့ သူတောင်းစားတို့ ၏ လွှတ်ေ...
လစ်ဗျားအစိုးရ နှိမ်နင်းမှု အိုဘားမား ဝေဖန်
မြန်မာပြည်မှ ကိုယ်ပိုင် အတတ်ပညာ အနုပညာ နှင့် ဦးေ...
အကိုင်းပေါ်က တဖြုတ်ဖြုတ်...ပြုတ်ကျနေဆဲ မျောက်များ
ကနေဒါနိုင်ငံ (Carleton) တက္ကသိုလ်က ချီးမြှင့်ခြင်း...
ရည်းစားစာ ခိုးဖတ်ချင်တဲ့ ကြံဖွတ် အထူးစုံစမ်း စစ်ဆေ...
နိုင်ငံတော်ကို တပ်မတော်က မပိုင်ပါဘူး.. ပြည်သူအားလံ...
မာန်နှင့် ဇွဲ - --လူထုစိန်ဝင်း
CfP Gala 2011 -- Aung San Suu Kyi asks filmmakers ...
အောက်ကဘဲနေချင်သူ မြိ့တော်ဝန်ပြုတ်၏ အရှက်ပြေအင်တာ...
မှန်ကန်သော အသိနဲ့ တပ်မတော်သားများ
နမိတ်ကတော့ ပြနေပြီ။ မြေမြိုသေမဲ့ လူပြိတ္တာ...
လှကြပါပေ့ သုံးတောင်ဝတ် ကျားများ
6 Six Libyan Soldiers Killed Burned Alive for refu...
အရပ်သားကို ရဲက လက်ထိပ်ခတ် ရိုက်နှက်
နိုင်ငံတကာ လူထု အုံကြွှမှု သတင်းများ (အာရပ်၊အမေရိကန်...
အလီဘာဘာရဲ့ ငွေတွေ ဘယ်ကိုရောက် ဘယ်ဆီ ခြေပေါက်
အဖေဘယ်သူခေါ်ရမလည်း မျက်စေ့သူငယ်နဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်
မနုဿီဟလို ဖင်နှစ်ခွဖြစ်နေတဲ့ ကြံ့ဖွတ်ဖခင်ကြီး အောင...
“ဂရုဏာလက် လူမှု အကျိုးပြု လူငယ်များ အဖွဲ့” ၏ မွန်မြ...
ပထွေးပစ်ပြေးတဲ့ စစ်တပ် ဘယ်သူ့ ဘက်ကရပ်မလည်း
Human shield ဆိုတာဟာ
မနိုင်လောက်က ဖင်လှန်ပြေးမည့် မျောက်မြေးအဖိုး
အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ မြောက်အာဖရိက လူထုဆန္ဒပြမှုများ အရ...
အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ကနေဒါအ...
ရဲဘော် သင်ပေးဆပ်ရန် အချိန်ကျပြီ
ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားနှင့် အရှင်မေတ္တာစာရ၏ တေ...
ကိုယ်ချင်းစာ မေတ္တာထားသော ဒေါ်လာစားများ
တရုတ်တွေလည်း အော်ကုန်ပြီ။ မြန်မာကရော မ ဆော်သေးဖူးလ...
ဓမ္မာရုံတွေပါ အပိုင် သိမ်းချင်တဲ့ကြံ့ဖွတ်
ဒို့ တွေရော ပါးစပ်ပိတ်နေကြရင်..လူ့ အခွင့်အရေးမီး က...
ကြံ့ဖွံ့တို့ ရဲ့ နိုင်ငံတော်ကြီး..
မဗေဒါအံကိုခဲ ပန်းပန်လျက်ဘဲ ( ဒီဇိုင်းနာကိုမျိုး ) ...
ပင်လုံသို့တကျော့ပြန် ခရီး (၁)
ခဲပေါက်ခံချင်သလား..(သို့ ) သင်သည် ခဲမလောက် နိုင်ငံ...